I-B&B eNtofontofo -1 Bedroom Suite-Igumbi lokuhlala & nekhitshi
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguCharles
UCharles unezimvo eziyi-83 zezinye iindawo.
UCharles ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
UCharles & Charles B&B ikufutshane neendawo zokutyela kunye nezokutyela, ulwandle, imisebenzi elungele usapho, kunye nobomi basebusuku. Uya kuyithanda le ndlu yobunewunewu ye-One Bedroom VINEYARD HAVEN suite ene-100% yeelinen zomqhaphu, ikhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlala labucala. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, kunye nabahambi beshishini. Sinika iindwendwe zethu ukusebenzisa simahla iibhayisekile zethu, izitulo zaselwandle kunye neetawuli zaselwandle- sibonelela ngesidlo sakusasa esishushu echibini yonke imihla. Inkonzo yesicaka esincinci ngenxa ye-Covid 19.
Indawo yethu yokulala kunye nesidlo sakusasa yindawo ezolileyo- akukho maqela, akukho mculo ungxolayo, kwaye akukho ndwendwe ezongezelelweyo ezivunyelweyo kwipropathi. Akukho ngxolo yalo naluphi na uhlobo, kubandakanywa iincoko ezivakalayo zivumelekile emva kwe-10PM. Uya kucelwa ukuba uhambe ukuba waphula nayiphi na le migaqo.
UCharles & Charles B&B ikufutshane neendawo zokutyela kunye nezokutyela, ulwandle, imisebenzi elungele usapho, kunye nobomi basebusuku. Uya kuyithanda le ndlu yobunewunewu ye-One Bedroom VINEYARD HAVEN suite ene-100% yeelinen zomqhaphu, ikhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlala labucala. Indawo yam ilungile kubatshati, abahambi bebodwa, kunye nabahambi beshishini. Sinika iindwendwe zethu ukusebenzisa simahla iibha…
85 Summer St, Vineyard Haven, MA 02568, USA
Umbuki zindwendwe ngu- Charles
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tisbury